processing baradhada - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Calaamadda processing baradho
Calaamadda: processing baradho
Nidaamka Baradhadu wuxuu hore u qoray qorshooyinka lagu dhisayo cilmi-baarista iyo wax-soo-saarka agrotechnopark. Abuurkeeda Chuvashia waxay kordhin doontaa wax soo saarka baradhada 2,5 jeer. ...
Patent ayaa dhawaan loo heli doonaa "mareegta baradhada"
Dhammaadkii 2021, madaxa waaxda beerashada baradhada ee YuUNIISK - laan ka mid ah Hay'adda Sayniska Miisaaniyadda Dawladda Federaalka UrFARC, Laanta Ural ee Akademiyada Ruushka ee Sayniska, Dhakhtarka Sayniska Farsamada O.V. Gordeev wuxuu ahaa...
Warshadaha farsamaynta waxay u baahan yihiin taageero dawladeed
4-tii Maarso, iyada oo qayb ka ah barnaamijka ganacsiga ee XIV Interregional Industry Exhibition "Badhadhada-2022", miis wareeg ah ayaa lagu qabtay dhibaatooyinka iyo rajada warshadaha wax soo saarka ...
Habaynta korriinka waxay ku baaqaysaa baradho badan
Baahida baradhada ayaa noqon doonta mid xoogan sanadaha soo socda iyada oo qaybta warshadaynta warshaduhu ay sii socoto inay koraan. Arrintan ayaa lagaga hadlay...
Hindiya waxay xallisaa dhibaatada xad-dhaafka ah ee baradhada
Akhilesh Yadav, Madaxweynaha Qaranka ee Xisbiga Samajwadi ee Hindiya, ayaa sheegay in maamulka xisbigiisu uu bixin doono kabitaan lagu dhisayo warshado...
Tolochin Cannery ayaa bilaabay khadka soo saarista shiilan barafaysan
Belarus, Tolochin Cannery ayaa bilaabay khad loogu talagalay soo saarista shiilan faransiis ah oo barafaysan. Waa markii ugu horeysay oo dalka laga sameeyo wax soo saar noocaan ah,...
Caanaha baradhada ayaa dhawaan imanaya khaanadaha UK
Durba bisha Febraayo 2022, silsiladda Supermarket-ka Waitrose waxay billaabi doontaa rarida summada Iswidishka ee caanaha baradhada loo qoday UK. Ingiriisku wuxuu cunaa karsan, dubay,...
Warshadda Cunnada fudud ee ugu weyn Hindiya oo Iibisa Labalaab marka la gaaro 2022
Pepsico waxay Hindiya ka bilowday warshad cunto fudud. Kani waa meheradda ugu weyn ee astaanta guud ee dalka. Kharashyada ...
Qalab cusub oo loogu talagalay soosaarka shiilan ee Faransiiska oo laga dhisayo Belarus
Wakaaladda Qaranka ee Maalgashiga iyo Gaaryeelidda Belarus ayaa ku warrantay in dhisme cusub oo loogu talagalay soo -saarka shiilan ee Faransiiska la qorsheeyay in laga dhiso dalka. V ...